Inogona here iOS 10 kuiswa pane iPhone 4s kana iPhone 5? | IPhone nhau
Ignatius Room | | iOS 10, iPhone 4S
Zviteshi izvo zvave zviri pamusika kureba kazhinji ndizvo izvo izvo munguva pfupi inotevera vanosiiwa vasina rutsigiro kubva kukambani. Asi zvese zvinoenderana nemugadziri. Wese munhu anoziva rutsigiro runotyisa runopihwa nevese Android vagadziri kumidziyo yavo, rutsigiro urwo dzimwe nguva runopera mushure megore rekutanga rehupenyu hwesimba.
Neraki zvishandiso zvakagadzirwa neApple, inotsigirwa neApple kwemakore mashoma, kudzamara nguva yasvika iyo iyo nhau uye zvinodikanwa kuti oparesheni ifambe zvakanaka, zvinomanikidza kambani kuti ibvise ivo kubva kumusika, ichivasiya vasina rutsigiro.
iOS 7 ndiyo yaive yekupedzisira vhezheni inoenderana neiyo veteran iPhone 4, terminal iyo panguva iyoyo yaishandiswa zvakanyanya munyika zhinji, kunyanya munyika dzichiri kusimukira. Iko kushanda kwese kwese iyi vhezheni yeIOS kwaive kusanzwisisika, izvo zvakatitungamira kufunga kuti yechisere vhezheni yeIOS yaisazowirirana neiyi terminal. Mune yakakosha iyo iOS 8 yakaunzwa, Apple yakasimbisa kuti iyo iPhone 4 yakanga isina rutsigiro uye yaizofanira kurarama mamwe mazuva ese neIOS 7.
Vhiki pasati pasunungurwa yeIOS 9, runyerekupe rwakatanga kutenderera nezve mukana wekuti iyi vhezheni yeIOS haienderane neiyo iPhone 4s, kubvira kubva kushanduro dzekutanga dzeIOS 8, iyo terminal yaive yave yechokwadi mapepa, senge iyo iPad 2 uye iyo Mini Mini. Neraki, izvo zvivandudzwa zvaitangwa nekambani zvakavandudza zvikuru mashandiro echisere vhezheni yeIOS.
Kuuya kweIOS 9, uko sekureva kwaApple ivo vaive vakanangana nekuvandudza mashandiro uye mashandiro munzvimbo dzakanyanya veteran, yaive zororo kune vese iPhone 4s uye iPad 2 vashandisi, sezvo kuvhiya kwaive kwakafanana zvakanyanya maererano nehunyoro uye mashandiro, pane yazvino mavhezheni eIOS 8.4.2, asi zvese zvaiita kunge zvinoratidza kuti ichave yekupedzisira vhezheni yeIOS yavaizogamuchira.
Kamwe kuratidzwa kwese kwese iOS 10 nhau kwaive kupera, iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yakaratidza rondedzero yetemu dzese dzinogona kuenderana neyegumi vhezheni yeIOS 10. iyo yataigona kuona kuti iyo iPhone 4s, iyo Mini Mini, iyo iPad 2 uye 3 pamwe neyechishanu chizvarwa iPod touch yakasiiwa kunze yeiyo yekuvandudza kutenderera. Asi maawa mashoma gare gare, apo Apple yakatumira dzese nhau nezve iOS 10 pane yayo webhusaiti (American vhezheni), isu taigona kuona kuti kambani iyi yainge yaisanganisira sei ma terminals aive akaraswa mune yakakosha.
Vagadziri vacho vaive vekutanga kuzivisa kuti zvinyorwa zvakaratidzwa pawebhusaiti Izvo hazvina kuenderana neshoko rakakosha mushure mekutarisa kuti ma terminals ekare aisabvumidza sei kuisa yekutanga beta yeIOS 10. Nekukurumidza Apple yakashandura rondedzero yeterminals inoenderana ichibvisa zviteshi zvandakambotaura pamusoro kubva kuquation. Saka iyo iPhone 4s inozopedzisira yasara isina rutsigiro uye haigamuchire iOS 10. Izvi hazvireve kuti kana chikanganiso chikuru chekuchengetedza chikaonekwa, Apple haizoburitse chigadziriso kuti igadzirise, asi icharega kugamuchira shanduro nyowani dzeanoshanda masystem iyo kambani inotanga mune ramangwana, kusanganisira iOS 10.
Iyo iPhone 5 yechikamu chayo, iyo inotevera veteran terminal pane iyo rondedzero nenguva mumusika, asi iine imwecheteyo Hardware seiyo iPhone 5c iyo yakabuda gore rakatevera, zvicharamba zvichitora matsva mashandiro ekushandisa kweanove makore mashoma, kutenderera kuri kutevedzwa nekambani kunoenderera, kuchisiya matemu eakagarira asingatsigirwe makore maviri ese. Kunyanya chishandiso changu kuyedza betas ndeye iPhone 5, uye ndinofanira kubvuma kuti mashandiro einenge yekutanga beta inonyorova zvakanyanya kana ichienzaniswa neyekutanga betas yakatangwa nekambani yeIOS 9, zvinoratidza kuti kambani iri chaizvo yakashanda mukuvandudza mashandiro uye hunyoro mumatanho ekare, kunyangwe paine chokwadi chekuti mazhinji emitambo inozouya kubva paruoko rweIOS 10 haizovepo nekuda kwekukanganisa zvine musoro kweyakare Hardware.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Inogona here iOS 10 kuiswa pane iPhone 4s? Uye pane iyo iPhone 5?
Mhoroi, ndinoshuva dai ndaigona uye kuyedza nzira yekuisa MacOS Sierra pane Mac Pro 2008
Mhoro Henry. Handina kuzviedza nekuti ini ndaisazvida (ndichazviita munaGunyana), saka handina chokwadi chekuti zvichashanda. Asi pane chishandiso chinonzi UniBeast (heino chekupedzisira http://www.tonymacx86.com/resources/unibeast-6-2-0.314/ ) iyo inotibvumidza isu kuisa Mac pane chero komputa (ini ndakazviita paLenovo, asi handina kunzwa sekutanga kuyedza kumisikidza ndega). Pfungwa ndeyekuita "Hackintosh" uchishandisa Mac chaiyo.
Sezvo ini ndisina kuiyedza, handina chokwadi kana iwe uchizoda Mac iyo inogona kurodha macOS Sierra, asi chauchazoda mumwe munhu kugovana macOS Sierra yekumisikidza faira newe kuti ugadzire Bootable USB ne Unibeast. Kana iwe uine rombo rakanaka, iwe uchakwanisa kuisa iyo nyowani system pane yako Mac uye, sezvo iri Mac chaiyo, zvinhu zvakaita seWi-Fi zvicharamba zvichikushandira iwe.
Mhoroi ini ndine mubvunzo ini ndine iphone 5c mr munokurudzira kuisa iyo beta? Ndizvozvo, ndakanzwa kuti bhatiri harigare
Ndiri kuiyedza pane iyo iPhone 5 uye hupenyu hwebhatiri hwakafanana. Vamwe vanhu vanotaura neimwe nzira, asi zvese zvinoenderana nekuti wakareba sei usati wagadzirisa foni kubva pakutanga, nekuti iwe unogona kuve nemazhinji mapurogiramu anosara anokanganisa hupenyu hwebhatiri.
David E Martinez akadaro
kana ndisingakwanise kurodha chrome pafoni yangu 4s inondiudza kuti ini ndinofanira kuimutsidzira os 10.0
Pindura kuna David E Martínez
Uffff kubva kune iyo iphone 4s yakachengetedzwa !!!
Mhoro unogona kukwidziridza pane 4s.
pane imwe nzira yekugadzirisa iyo iphone 4s
Ini handizive nezvekuvandudza, ini handivimbe parunhare, ndinoshandisa zvakakosha uye iyo iPhone 4s yakanaka kwazvo, ine zvazvinotora.
Rombo rakanaka, ndakatenga iPhone 4S, ndakanga ndisati ndambove nerudzi rwe mac kifaa, mubvunzo wangu ndewekuti zvinokanganisa sei IOS inogadziridza? Ndiri kureva, iyo 4S haichashandi pamasocial network mazuva ese uye zvese izvo?
Kana varume uye ikashanda nekukurumidza ini ndinowana flextore uye kurodha pasi zvese mahara.
vic sanz akadaro
Iwe unogona ikozvino kugadzirisa kubva iphone 4s kusvika ios 9.3 chete uye ne iphone 5 ios10.1, zvakakosha kusiya nzvimbo yemahara sezvo ichingova ne8gb, uchafanirwa kudzima maapplication uye wozoadzokorora gare gare nenzvimbo yekuisa iwo maapps ayo unoshandisa zvakanyanya
Pindura kuna vic sainz
Ndinoisa sei iOS 10 pane yangu iPhone 4s xq ini handikwanise kudhawunirodha chrome application
Pindura kuna Henrry
Iyo yechipiri vhezheni yeCarPlay iOS inosvika kune inoenderana zvishandiso
Xiaomi Makaralı Metal Mutauri, diki uye ine simba mutauri iyo inogara ichienda newe